The political and economic meltdown in Zimbabwe is a major concern for citizens of the country who has continuously suffered rejection and opposition in other countries where citizens see them as burden.
This is the same situation Zimbabweans found themselves in South Africa today. Many South Africans currently see Zimbabweans as competitors in their country and this was the exact reason that led to the establishment of a group known as Operation dudula. The group has been pushing for controlled immigration in South Africa, specifically they have warned Zimbabweans in several occasions to leave South Africa and go back to Zimbabwe.
However, a concern Zimbabwean man known as Bla Enzo on Twitter has stated that Zimbabwean nationals are ready to face the administration of ZanuPF in the country but the issue at hand is the fact that Zimbabwean police are ever willing to offload live bullets into anyone who stands to oppose the current government.
He admit that this is one of the factor inhibiting Zimbabweans from taking action against the government of Emmerson Mnangagwa.
According to Bla Enzo's exact statement on Twitter and it says:
"It's hard opposing ZanuPF, especially facing a lot of police that's willing to offload live bullets on you. We're in wrong hands".
Bla Enzo South Africa Zim Zimbabwe Zimbabweans
Mihlali Ndamase left fans speechless with breathtaking pictures in dazzling fashion trends.